Ampitatafika Andrefambohitra Mampitaraina ny mponina ny haratsian’ny sampan-dalana
Andrasana ny fanamboarana fotodrafitrasa tena maharitra eto amintsika. Voakasik`izany ny fanamboaran-dalana.
Natao peta-toko sy vonjy tavanandro, hany ka izao iaraha-mahita izao ny fahapotehany ao anatin`ny fotoana fohy. Saika mitaraina avokoa ny tompon`ny fiara rehetra eny Andrefambohitra, kaominina Ampitatafika, noho ny haratsian`ny sampan-dalana. Fiara maro no mijaly, indrindra ireo fiara iva. Kodiarana maro no efa vaky eo amin`io sampan-dalana io. Mitohana ny fiakarana ao tampon-tanànan`Ampitatafika satria mijaikojaiko ireo fiara rehefa miditra any Andrefambohitra. Miantraika mivantana any amin`ny fiarakodia ny lalana simba. Potika ny fiara nefa lafo ny vidin`ny kojakoja vokatry ny lalana ratsy. Efa an-taonany maro no mampitaraina ny mponina io sampan-dalana io. Natao vy ilay lalana dia misy mangalatra. Natao rarivato na koa “béton”, tsy mahazaka ireo kamio sy ireo fiarabe mpitatitra entana. Etsy an-daniny, ny lalana efa ratsy sady tery kanefa ireo mpivarotra amoron-dalana dia manao izay danin’ny kibony. Tsy mahagaga raha tsy marisika amin’ny fandoavan-ketra ny olom-pirenena. Tsy tsapany sady tsy hitany akory ny nampiasana ny hetra naloany. Na dia ao anatin`ny fiandrasana ny vokatra ofisialin`ny fifidianana kaominaly aza dia tokony handray andraikitra foana ny lefitry ny tanana satria izy ireo no mitantana ny tanàna. Maro ny kaominina no misedra toe-javatra toy izao. Andrasan`ny mpampiasa lalana ny hametrahan`ny kaominina paikady mahomby amin`ity lafiny fikojakojana ny lalana ity.